Nchịkwa na Thermomix - Ezi ntụziaka na usoro nri | Usoro ọgwụgwọ
Mgbe anyị rutere nso n’oge ọkọchị, anyị na-emekarị nri dị iche iche na ọkụ Ezi ntụziaka iji lee anya na akwa mmiri ma ọ bụ bikinis, ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịme a ezigbo nri nke ahụ dị mma ma maka nke ahụ, kedu ihe ka mma karịa ịnwe a Igwe ọkụ.
Mma Ezi ntụziaka Thermomix
Si buscas nri Ezi ntụziakaSite na Thermomix ị nwere ike ịme efere ndị ahụ efere, n'ime ihe ọilledụ theirụ ha, sie ma ọ bụ mepụta ihe ndị ahụ maka efere ndị ọzọ, n'ihi na ọ ga-abụrịrị nri dị mma yana ihe ndị kachasị mma na enweghị abụba. Nwere ike ịchọta ebe a niile kachasị mma ezigbo ntụziaka maka ezigbo nri.
Typesdị efere ndị a na-atụ aro nke ukwuu maka njedebe nke ụbọchị na ọtụtụ nri ndị ị ga-ahụ ebe a bụ ọkụ Ezi ntụziaka maka nri abalị ọ bụ ezie na ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ha na nri.
Peas na ham
por Ọnye na -bụ Silvia Benito? eme 1 ọnwa .
Ntụziaka a sitere na akwụkwọ Thermomix® Lekọta ahụike gị. Akwụkwọ na -amasị m maka ọnụ ọgụgụ nri ...
Owuwe ihe ubi (ude akwukwo nri)
por Elena Calderon eme Ọnwa 2 .
Ọ bụ ude mmiri bekee na-atọ ụtọ, nke a na-akpọ "ojiji" n'ihi na anyị nwere ike iji akwụkwọ nri anyị nwere na ...
Achịcha sponge zuru ezu nke nwere mkpụrụ osisi, mkpụrụ na mịrị
Nke a bụ achicha mbụ m na-eme, mana m na-agwa gị na ọ gaghị abụ nke ikpeazụ, ahụrụ m ya n'anya! Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ…
Mkpụrụ osisi na pasta salad
por Elena Calderon eme Ọnwa 3 .
Taa, anyị na -ewetara gị efere dị mfe, nke dị ọhụrụ na nke mbụ. Otú ahụ ka mkpụrụ osisi a na salad pasta dịkwa. N'oge ọkọchị,…
Nke a bụ otu n'ime ndị mbido kachasị amasị anyị. Ọ bụ otu n'ime emebere na ekeresimesi yana site na ...
Mmiri mmiri na papillote
por Ọnye na -bụ Silvia Benito? eme Ọnwa 3 .
Nke a bụ otu n'ime usoro nri ndị ahụ na -abịa mgbe niile maka nri abalị ma ọ bụ obere nri. Ọ kacha mma iri azụ sitere na ...
Ude Asparagus Green
Ahụtụbeghị m ụtọ ude asparagus bara ụba dị otú ahụ! O nwere udiri mara nma nke ukwuu n'otu oge mana ...
Akwụkwọ nri Catalonia
Oge ọ bụla bụ oge dị mma ịmalite ilekọta onwe gị ntakịrị, ma ọ bụ n'ihi oke ekeresimesi, oge ọkọchị ...
por Mayra Fernandez Joglar eme Ọnwa 3 .
Octopus ceviche a bụ uzommeputa zuru oke maka oge ọkọchị. Ọhụrụ, ngwa ngwa, dị mfe ma dịkwa mfe ... naanị 70 kcal. Kedu ihe ọzọ…
Ude nke na-acha uhie uhie, na chiiz ohuru na agwa ndu
Maraworị na n'ụlọ anyị hụrụ creams, stews na ofe n'anya. Oge a ka m nwere ụfọdụ ose na ...
Kiwi na prawn salad
Okpomọkụ nke oge ọkọchị na -abịaru nso na ilekọta onwe gị ụdị saladi a zuru oke. Agbalịrị m ...
Hake na steamed inine
Steamed ọhịa asparagus
Ude nke broccoli
Osisi Strawberry Banana Smoothie
Omenala akwukwo nri puree
Veggie Eggplant Burgers
Leek, karọt na ude nduku
Akwụkwọ nri ude béchamel
Detoxifying apụl, kukumba na celery ihe ọ juiceụ .ụ
-Esi mee poached nsen (nzọụkwụ site nzọụkwụ)